minthantzaww: သင့်အကောင့် ban ခံရလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား !!!!
ဂျီမေး(gmail) ဆိုတာ google ကနေ ၀န်ဆောင်မှုပေးထားတဲ. စာပို့ဆောင်ရေးစနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ဂျီမေးကို အေပရယ်လ ၁ရက်နေ. ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဖိတ်ကြားခြင်း(invitation) တစ်ခု အတွက်သာ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ.ပြီး၂၀၀၇ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ မှာ အများပြည်သူ အထွေထွေသုံး ဖို.ဖြစ်လာခဲ.ပါတယ်။၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တစ်လကို ဂျီမေးကို သုံးစွဲသူပေါင်း ၁၉၃.၃ သန်း ရှိတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
ဂျီမေး လက်ရှိ သိမ်းဆည်းထားနိူင်မှု (7GB) ကိုဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ. အလကား ပေးထားပါတယ်။အသုံးပြုသူများအနေနဲ.
သိမ်းဆည်းမှု ထပ်မံတိုးမြင်.ရန် ဌားရမ်းခ အနေနဲ. (20GB) တစ်နှစ်စာအတွက် အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာ ၊16 TBတစ်နှစ်စာ အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၉၆ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေပရယ်လ ၁ ရက်နေ. ဂျီမေး နှစ်ပတ်လည် နေ့မှာ ဂျီမေး ရဲ. စီမံခန်.ခွဲမှု မန်နေဂျာ Georges Harik က (1GB)ထပ်မံတိုးမြှင်.ပေးရန် ကြေငြာခဲ.ပြီးဂျီမေးကနေ အသုံးပြု သူ များအတွက် သိမ်းဆည်းထားနိူ်င်မှုများ ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ် လို. ပြောကြားသွားခဲ.ပါတယ်။
gmail labs ကိုအသုံးပြုပြီးတော.ဂျီမေး၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို ၅ရက် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှာ စတင်ခဲ.ပြီး အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ စာမျက်နှာများကို မှတ်သားခြင်း ၊ကီးဘုတ် shortcut များအသုံးပြုနိူင်ခြင်း နှင်. ဂိမ်းကစား နိူင်ခြင်းများ ကိုပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ. gmail labs ကိုဖွင်.ထားနိူင်သလို ပိတ်ထားလို.လည်းရပါတယ်။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာမှာ sms message တွေကို ထပ်ပေးခဲ.ပြီး ၂၈ ရက်နေ. ၂၀၀၉ မှာ offline ဖြစ်သော်လည်း စာများလက်ခံနီူင်ခြင်းကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပေးခဲ.ပါတယ်။
ဂျီမေး ကို Paul Buchheit ကဖန်တီးခဲ.ပြီး နောက်ပိုင်းမှ အများသုံးအဖြစ်ကြေငြာနိူင်ခဲ.ပါ
တယ်။ အစပိုင်းမှာ google မှ ၀န်ထမ်းများ ကုမ္ပဏီအတွင်းသာ အသုံးပြုခဲ.ပြီး အေပရယ်လ ၁ရက်နေ. ၂၀၀၄ မှာမှ အများပြည်သူသုံးအဖြစ်ကြေငြာနိူင်ခဲ.ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ.မှာ IMAP ကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီမှုအနေနဲ. ထပ်ပေါင်း အသုံးပြုခဲ.တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
ဂျီမေး အကောင့် disabled ဖြစ်သွားသူတွေ အတွက်ပါ
အခုတလော ဂျီမေး အကောင့် disabled ဖြစ်သွားသူတွေ ခဏခဏ ကြုံနေရပါတယ်။
ပြဿနာ ကြုံသူအများစုဟာ ဆော်ဒီ ပရောက်ဆီ နှင့် ကျော်ခွ ထွက်လေ့ရှိသူများ
ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဂျီမေးအကောင့် disabled ဖြစ်သွားပါက ဂူးဂဲလ်မှ
မိမိ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပတ်ကို တောင်းပါမယ်။ အကောင့်ကို reactivate
လုပ်ရန်အတွက် ဂူးဂဲလ်မှ ထို ဖုန်းနံပတ်သို့ text message သော်လည်းကောင်း၊
voice message သော်လည်းကောင်း ပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှ မိုဘိုင်း နံပတ်များကို မပို့ပေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိမိ၏ အကောင့် disabled ဖြစ်ပါက Contact Support ( http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=40695&a...
) မှ နေ၍ reactivation request လုပ်ခြင်းသာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်း
ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ လင့်ကို disabled ဖြစ်နေသော အကောင့်သို့ ဝင်လိုက်ပါက
မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် re-activate လုပ်သည် ဖြစ်စေ အကောင့် recover ဖြစ်ရန် ရာခိုင်နှုန်းကတော့ 50-50 ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဆော်ဒီ ပရောက်ဆီ ဖြင့် မိမိ၏ ဂျီမေးအကောင့်ကို ဝင်ရောက်ဖြင်းအား တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားကြပါလို့ သတိပေးလိုပါတယ်။
အောက်ကတော့ မသိသေးသူများ အတွက် အကြံပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် အိပ်စ်ပလိုရာ နှစ်ခု သုံးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်သို့ ၁။) ဆော်ဒီ ပရောက်ဆီ ဖြင့် မော်ဇီလာကို သုံးပါ။ ၎င်း
မော်ဇီလာဖြင့် ဂျီမေး လုံးဝ မသုံးပါနဲ့။ ဂူဂဲ အကောင့်သုံးရမည့်
နေရာမှန်သမျှ မသုံးပါနဲ့။ ဥပမာ။ ဂူးဂဲ search တောင် မိမိ၏ အကောင့်နဲ့
အင်တာနက်သို့ ၂။) တရားဝင် ပရောက်ဆီဖြင့် Google Chrome ကို သုံးပါ။ ၎င်းဖြင့် ဂျီမေးသုံးပါ။ ဂူဂဲ အကောင့်သုံးရမည့် နေရာမှန်သမျှ သုံးပါ။
အားလုံး အကောင့်ပိတ်ခံရခြင်းမှ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ...
Posted by Myanmar Blogger Collection on 12:53 AM
သင့်အကောင့် ban ခံရလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား !!!
အခုတလောကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံက လူတွေတချို့ဟာ gmail, gtalk နဲ့ vzo chat အစရှိတယ် အခမဲ့ ဝန် ဆောင် မှု ပေးတယ့် application တွေကို သုံးလာတာအများအပြားဖြစ်လာပါပီ အယ်ဒီလို သုံးစွဲသူတွေ များပြား လာတာနဲ့အမျှ လက်တည့်စမ်းသူတွေ အကောင့်တွေကို ban တာ hacking လုပ်တာတွေဟာ မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားရပါတယ် ။ ကျနော် တို့လို ဖွံဖြိုးဆဲ နိူင်ငံတွေမှာ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်ထွက်တာ ။ credit card သုံးတာတွေ မရှိသေးပါဝူး ။
ဒါကြောင့် ပြသာနာတွေဟာ သိပ်မကြီးမားဝူးလို့ ထင်ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ social သုံးနေတယ့် အကောင့် ကို ခိုးခံရ ပီသော လည်းကောင်း spam mail အရေအတွက် များပြားလာတာကြောင့် account password တွေကို locking ချတာဖြစ်ပေါ်တာကြောင့်လည်း ကောင်း သင့်ရဲ့အကောင့် ကို ခိုးခံရပီ လို့ သံသယ ၀င်တတ် ကြ ပါတယ်။
အယ်ဒီလို ဖြစ်လာတယ့်အခါ တယောက်ကို တယောက် အကူအညီတောင်း နဲ့ အရမ်းကို အလုပ်တွေ ရှုပ်လာ ကြပါတယ် . ဒါပေမယ့် ကျနော် အခု ပေးမယ့်လင့်ခ် လေးကတော့ သိပီးသားသူတွေလည်း သိမှာပါ မသိသေး တယ့်သူတွေအတွက်ရည်၇ွယ်ထား တာပါ အယ်ဒီမှာ အချက်တွေကို မှန်အောင် သော်လည်းကောင်း ခန့်မှန်းခြေဖြည့်ရမှာပါ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေ နဲ့ ကိုယ့်အကောင့် ကို လူတွေက ခြိမ်းခြောက်လာကြပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ပြောတယ့် မင်းရဲ့ contact အကောင့် (၅) ခုကို သိရင် မင်းအကောင့်ကို ခိုးခံရပီလို့ ထင်နေ ကြတယ် ဒါတွေက အလကားခြိမ်းခြောက်တာတွေပါ မင်းရဲ့ Most contact ထဲကလူငါးယောက်နဲ့ မင်းစတင် ပီး ဒီအကောင့်ကို ဖွင့်တယ့်နေ့ (အနီးစပ်ဆုံးပေါ့) ဒါတွေသိမှ လုပ်လို့ရမှာပါ ။ အကယ်ရ်ျ သင့်အကောင့် ban ခံရပီဆိုပါတော့ ဘယ်အချိန်က ဒီအကောင့်ကို ဖွင့်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ပါဝူး ။။။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ အကြံ ပေးပါရစေ ခုခေတ်လူငယ်တွေမှာ အနည်းဆုံးအကောင့် (၃) (၄) ခုလောက်တော့ရှိမှာပါ ၊ အယ်ဒီမှာ သင့်အကောင့် တွေကို တခုနဲ့ တခု ချိတ်ဆက်ပီး သုံးရင် hacking လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူပါဝူး ။
အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းတယောက်က မေးတာလေးပါ...
ဒီနည်းလမ်းကတော့ filter ခံတာလေးပါ ။ တချို့သိတာတွေကတော့ filter ဆိုတာ မလိုချင်တယ့်မေးလ်တွေ spam , spyware , malware တွေကို ကာကွယ်စေချင်သောလည်းကောင်း စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးတယ့် မေးလ်တွေ စာတွေ ကို inbox ထဲမရောက်အောင်လုပ်တာပါ ...
ဒီနေရာမှာ ပထမ ဥိးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့် Gmail account ထဲမှာ label ထားရမှာပါ...
၁.သင့်ရဲ့ inbox (menu bar) အောက်မှာ မြှားလေး၇ှိပါတယ် ။ ဒီမြှားကို
click လုပ်ပီး creat label ဆိုတာကို click ပါ..
၂.ပေါ်လာတယ့် box လေးမှာ သင် နှစ်သက်ရာနာမည်ကို ပေးပါ ဥပမာ - mail striker ဆိုပါတော့
၃.အယ်ဒီ label ကို သင်ပြုလုပ်ပီး ပီ ဆိုတာနဲ့ အယ်ဒီ label ထဲကို
ထည့်ချင်တယ့် မေးလ်း ကို ဘေးနားမှာ ရှိတယ့် လေးထောင့် box သေးသေး လေးကို
၄.ပီးရင် ဒီမေးလ်တွေရဲ့ အပေါ်မှာ more action ကို click ပါ (မှတ်ချက် ။ ။
မေးလ် တခုခု ကို အမှန်ခြစ်ထားမှ လုပ်လို့ရမှာပါ )
၅.ပေါ်လာတယ့် ဇယားလေးမှာfilter message like these ဆိုတာလေးကို click ပါ
၆.ဒါဆိုရင် အပေါ်ကနေ item box တခုကျလာပါမယ် အယ်ဒီမှာ ဘာမှ ရေးစရာမလိုပါဝူး
၇.skip the inbox (archieve it) / apply the label / Also apply filter to 90 conversation below ဒီသုံးခုကို အမှန်ခြစ်ပါ
၈. နောက်ဆုံးအနေနဲ့create filter ကို နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သင့် ဆီကို ရောက်လာတယ့် မေးလ်က အလိုလို အယ်ဒီနေရာကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်......
သင် ဖတ်ရူ ချင်လျင်တော့ အယ်ဒီနေရာကို သွားရမှာပါ...
label တွေကို inbox (menu bar) တွေမှာ အစီစဉ်အလိုက်ato z ,1.2.3.
ဒါက forward mail များကို auto သိမ်းဆည်းခြင်းပါ....
မိမိ Block ထားသောသူအား သူ့ Gtalk တွင် မမြင်ရအောင် Deleteလုပ်နည်း
Posted by Myanmar Blogger Collection on 11:42 PM
Gtalk ကနေ မိမိနှင့် အဆင်မပြေသူကို မိမိဘက်က Block သို့ Remove လုပ်လိုက်ရင် မိမိဘက်ကသာ သူ့ကို မမြင်ရတော့ပေမယ့် မိမိ Block သို့ Remove လုပ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ Gtalk မှာတော့ မိမိနာမည်ရှိနေသေးတဲ့ အတွက် သူ့ဘက် Chat လို့ရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က Block လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ Gtalk List မှာ ရှိနေဦးမှာပါ.။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် အပြီးအပိုင် သံယောဇဉ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေး အတိုင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး Gmail ကို ဖွင့်ပါး။ ပြီးရင် Contacts ကို ရှာပြီး Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ Contacts Box ကျလာရင် မိမိ Delete လုပ်ချင်သော Account ကို ရွေးပြီး အမှန်ခြစ်ကာ Delete contact ကို click နှိပ်လိုက် ပါ။ တကယ်ဖျက်မှာလားလို့မေးတဲ့ Box ကျလာရင် OK ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို မိမိမဆက်သွယ် လိုသူကို အပြီး အပိုင် သံယောဇဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ။ သူ့ရဲ့ Gtalk မှာလည်း မိမိအမည် မရှိတော့သလို သူ့ Gtalk မှာ လည်း ကိုယ့်အမည် ကျန်ရှိတော့မည် မဟုတ်တော့ပါ။
အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။ (ဒီနည်းနဲ့စမ်းပြီးပြီ အစဉ်မပြေပါ
အီမေးလ်အကောင့်တခုမှ တခုသို့ ရွေ့ပြောင်းခြင်း
Posted by Myanmar Blogger Collection on 11:23 PM
အီမေးလ်အကောင့်တခုမှ တခုသို့ ရွေ့ပြောင်းရသည့်ကိစ္စမှာ လွယ်ကူလှသည် မဟုတ်ပေ။
အကြောင်းကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်း လာခဲ့သော အီးမေးလ်များ၊ လိပ်စာများ အကောင့် တခုသို့ ရွေ့ပြောင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပျောက်ဆုံး သွားတတ်သည်။ သို့သော် ကံကောင်းအား လျော်စွာဖြင့် ဂျီမေးလ်က အကောင့်ပြောင်း ရွေ့မှု အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဂျီမေးလ်က အခြားသော အီမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော AOLသို့မဟုတ် Hotmail များမှ အကောင့်များ ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော Tool များ ကို ပြုလုပ်ကြောင့် ကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုချိန်၌ အီးမေးလ် Provider၁၄ ခု ၏ နိုင်ငံတကာ ဒိုမိန်းများမှ ရွေ့ပြောင်းနိုင်ရန် ထပ်မံထည့်သွင်းထားကြောင်း ဂျီမေး လ် က ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို Email Provider များမှာ -
ထို့ပြင် ဂျီမေးလ်က gmail.com/switch ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ဖန်တီးပြီး ၎င်းတွင် ဂျီမေးလ်သို့ မည်သို့ ပြောင်းရွေ့ ရမည်၊ မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်စသည့် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။
G talk ဘာသာပြန်အကောင့်လေးတွေ
Posted by Myanmar Blogger Collection on 12:16 AM
Gtalk ကိုအသုံးပြုပြီး ဘာသာပြန်ပေးနိုင်မယ့်Translator Bot (automatically replied talk robot) လေးတွေကိုထည့်နိုင်ဖို့ပါ။
လောလောဆယ် ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ bot ပေါင်း နှစ်ဆယ့်လေးခု ရှိပါတယ်..
EN = English, NL =Dutch, DE = German, ES = Spanish, FR = French, IT = Italian, KO =Korean, RU = Russian, JA = Japanese, ZH = Chinese ပါ..
ဥပမာ - တရုတ်ကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဘာသာပြန်ချင်တယ်ဆိုရင် ...
zh2en@bot.talk.google.com.. ဆိုတဲ့ အကောင့်ကို သင့်ရဲ့ Contacts List ထဲမှာ Add လိုက်ပါ.. ပြီးရင်ဘာသာပြန်လိုတဲ့ တရုတ်စာသားကို သဒ္ဓါမှန်မှန်ရိုက်ပါက သူကလည်း အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်း မွန်မွန်ဘာသာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်....
အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ အကောင့်ကတော့ .. en2mm7@mmgeeks.org ပါခင်ဗျား
Posted by Myanmar Blogger Collection on 11:16 PM
ခေတ်မှီတိုးတက်လျက်ရှိသောယနေ့ခေတ်တွင် Email ဆက်သွယ်မှုသည်လွန်စွာအရေးပါလျက်ရှိရာ Gmail နှင့် အခြား Office mail များမှ GSM phone များသို့ SMS စနစ်ဖြင့် Message ပို့နိုင်မည့်စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ GSM phone မှလည်း email သို့ အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်နိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ Mail Filter ပြုလုပ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ Gmail နှင့် Office Mail များကို Internet Access အသုံးပြုစရာမလိုပဲ လူကြီးမင်းတို့၏ Mobile phone များမှ Mail များကိုစစ်ဆေးနိုင်မည့် Email Alert စနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ Email2 SMS အသုံးပြုရာတွင် Email မှ GSM သို့ SMS တစ်စောင်ကို ကျပ် ၁၀၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး GSM မှ Email သို့ SMS ပို့ရာတွင် ကျပ် ၁၀၀ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
Email မှ GSM သို့ message ပို့ရန်
(၁) Email မှ GSM ဖုန်းသို့ Message ပို့ရန် Email ပို့မည့်သူသည် Member ဖြစ်ရပါမည်။
(၂) မိမိ၏ Email မှ To နေရာတွင် email2sms@etmsms.com ကိုရိုက်ပါ။
(၃) Subject နေရာတွင် မိမိပို့မည့် GSM ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
(၄) Message Box တွင် မိမိရိုက်လိုသော စာများအား ရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ကြိမ် လျှင် စာလုံးရေ (၁၆ဝ) လက်ခံပါသည်။ ယင်းထက်ကျော်လွန်သွားပါက နောက်တိုး Message ၂, ၃, . . .စသည်ဖြင့် သတ်မှတ် သွားမည်။ (ပုံ ၄-၁)
မှတ်ချက် ။ ။ နိုင်ငံခြား ဖုန်းနံပါတ်ရှေ့တွင် ( + ) ထည့်ပေးရန်။ မိမိပို့ချင်သော ဖုန်းနံပါတ်များကို ( , ) ခံပြီး ရိုက်ရန်။
GSM မှ Email သို့ message ပို့ရန်
GSM ဖုန်းမှ မည်သည့် Email လိပ်စာသို့ မဆို SMS ဖြင့် emailပို့နိုင်သည်။
(1) ပေးပို့မည့်သူသည် member ဖြစ်ရပါမည်။
(2) မိမိဖုန်း၏ Menu Option ကိုသွားပါ။
(3) Create Message ကိုရွေးပါ။
(4) Text Message ကိုရွေးပါ။
(5) Message Box ၌ +yinkhaing@gmail.com happy Birthday ဟုရိုက်ပါ။
(6) Send Ph: နေရာ၌ 5195333 ကိုရိုက်၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Filed in: Gmail Technology
Gtalk ကို ၀ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကနေ ဘယ်လို chat မလဲ
Posted by Myanmar Blogger Collection on 8:13 PM
Gtalk ကို ၀ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကနေ ဘယ်လို chat မလဲ ...
ကဲ အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကနေ gtalk ကို ချက်လို့ရပါတယ် .. နောက်ထပ် ၀ဘ်ဆိုက်တွေ ကိုလဲ ထပ်ဖြည့်ပေးပါဦးမယ် ..
ဥပမာတစ်ခုပြလိုက်ပါ့မယ် .. http://webuzz.im/ ကိုဝင်လိုက်ပါ ... အပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံနဲ့ပြထားပါတယ် .. ဆိုက်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ gtalk ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ icon လေးကို ကလစ်လိုက်တာပြီး gtalk ကို ၀င်ချက်လို့ရပါတယ်။ သူက online chatting system ဖြစ်ပါတယ် .. gtalk ကို install လုပ်စရာမလိုပါဘူး .. ၀ဘ်ပေါ်မှာတင် ချက်လို့ရပါတယ် ..
Gmail ကို (attach မဟုတ်ပဲ) ပုံနှင့်တကွ ပို့ခြင်း။
Posted by Myanmar Blogger Collection on 1:20 AM
Gmail ဖွင့်ပြီး Setting ကိုသွားပါ။
Lab ဆိုတဲ့ Tab ကိုရွေးပါ* (က) Extra Emoji ဆိုတာကတော့ (ပုံထည့်တဲ့နည်းနဲ့) မဆိုင်ပါဘူး။ စာရေးနေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပျော်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ [?] ဒီလိုထည့်လို့ရဖို့ပါ။ ကျန်တဲ့ဟာ တွေက (ခ) Flickr/Picasa Preview in mail => Flickr, Picasa (ဓါတ်ပုံ) Site က Mail တွေကို ကိုယ့် Email မှာတစ်ခါတည်းပေါ်အောင် ဖွင့်တာပါ ။ (ဂ) Picture in the chat => ကိုယ့် Gtalk/Gmail Chat ထဲမှာ ပုံတင်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပုံကို တစ်ခါတည်း ဖေါ်ပေးစေချင်ရင် သုံးတာပါ ။
Inserting the Email ဆိုတာကတော့ Enable လုပ်ကိုလုပ်ထားပါ။ ပုံထည့်ဖို့ပါ။
စာပို့ဖို့ Create Mail/Compose Mail ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်က* *အတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။ ပုံထည့်ဖို့အတွက် ဒါကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သူ့ဘေးက ပြုံးနေတဲ့ပုံက* (က) * ရှင်းပြထားပါတယ်။*
ကိုယ့်စက်ထဲကပုံတွေကိုတင်မယ်ဆိုရင် My Computer ကို Select လုပ်ပါ။ Browserကိုနှိပ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ File Upload Window ထဲမှာမှ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ File ကို Locate လုပ်ပြီး Select လုပ် ပြီး Open (သို့) File ကို Double Click လုပ်ပါ။*
Upload ပြီးရင် အောက်ကအတိုင်း ပုံပေါ်လာပါမယ်။ Select လုပ်ပြီး Ok နှိပ်ပါ။
(ပုံကို Upload မလုပ်ခင်မှာ ကိုယ့်ပုံကို ဘယ်မှာထားချင်တယ်ဆိုတာကို Cursor အရင်ချပါ။ ဒါမှမဟုတ် လည်း ပြီးမှကိုယ့်ဟာကိုရွှေ့လည်းရပါတယ်။)* *ပုံကိုထပ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Browser ကိုထပ်နှိပ်ပြီး (၆.) ကိုပြန်လုပ်ပါ။ Upload ပြီးတဲ့အထိစောင့်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။*
group chat လုပ်လိုပါက gtalk တွင် aurorageneration@jaconda.im ကို add ပါ။
We are warmly welcome to you. * If you need help you may ask to aurorageneration.management@gmail.com , phonezinoo@gmail.com,9.space.study@gmail.com,jothar001@gmail.com,lwan.nay.ya.thu.par@gmail.com
Posted by minthantzaww at 06:17
အစ်ကိုရေ ဂျီမေးကနေပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကော ဘယ်လိုခေါ်ရပါသလဲ
ရုရားကနေဂျီတော့သုံးပြီး ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာကနေ သူခေါ်ချင်တဲ့မြန်မာပြည်
Facebook ပြသာနာအဖြေရှာ via IT Reshare Site by
Window7ရဲ့ Theme ပုံစံသုံးနေရတာရိုးသွားတဲ့လူတွေအ...
မြန်မာပြည်က ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးလိုသူတွေအတွက် Int...